गीतकार अनी कर्णल आनन्द सँगको मेरा बिगत क्षणहरु - ८
ब्यवहार र चरित्रको कुरा गर्ने हो भने म आनन्दलाई सधैं सहनशिल, गहनबिचराक र भाबुक ठान्दछु । अबोला किसिमको र शान्त स्वभावको भएकोले म आनन्दलाई अल्पभाषी भन्न पनि रुचाउँछु । हाम्रो सधैंको भेटमा जहिल्यै गीत-सङीत, साहित्यको छलफल हुन्थ्यो । त्यो बाहेक हामी कहिल्यै टाढा गएनौ । कतै जान परे एफ.एम. रेडियो, रेकोर्डिङ स्टुडियो अनी साङीतिक् क्षेत्रका मान्छेहरुसङका भेट्घाट यत्तिमा नै हाम्रा समयहरु ब्यतित भए । मेरो आफ्नो घर काठमाडौंमा नभएकोले म बिरालोले घर सरे झै कहिले कहाँ कहिले कहाँ बस्ने गर्दथे तर म जहाँ बसे पनि आनन्द मलाई खोज्दै आइपुग्नु हुन्थ्यो । मानौ ''दिदी जहाँ बसे पनि वहाँलाई आउन गार्हो लाग्दैनथ्यो।
'एक दिनको कुरा म सम्झन्छु म सोर्हखुट्टे मेहेपीमा बस्ने गर्थे । आनन्दले मलाई भेट्न आउनु भयो । हाम्रो कुराकानी पश्चात वहाँ जान तयार हुनु भयो । मैले पनि पुतली सडकसम्मा जाने निधो गरे । वहाँले हुन्छ भन्नु भयो । म पनि वहाँसँग जान वहाँको मोटर बाइकमा बसे । हामी गैरहेथियौ । सोर्हखुट्टेको उकालोमा हाम्रो अघी अघी एउटा समान लोड भएको ट्रक उकालो चढिरहेको थियो । खै के भएर हो त्यो ट्रक त स्लिप भएर ओरालो झर्न थाल्यो । हामी पछाडि थियौ । झन्डै त्यो ट्रकले हामीलाई किच्यो । तर आनन्दले हठातको साथ सावधानी अप्नाइ हाल्नु भयो नत्र त्यो दिन हाम्रो अन्त्य हुनेथ्यो । त्यो घटना सम्झिदा अहिले पनि कहाली लागेर आउछ । त्यस्तै अर्को घट्ना म सम्झिन पुग्छु । एक दिन हामी के. ए. टि एच .एफ. एम जादैथियौ । हामी के पुग्न मात्र आँटेका थियौ, यस्तो हावा हुँडरी आयो कि मलाई त झन्डै ऊडायो । के गर्ने आफु त सानो मान्छे । धन्न आनन्दले मलाई हावा बहेको बिपरित हत्त पत्त फर्काउनु भयो । नत्र त म झण्डै लडेकी । यस्ता यस्ता घट्नाहरु अहिले सम्झेर मलाई कता कता हाँस पनि उठ्छ, कता कता नराम्रो पनि लाग्छ ।
यत्तिकैमा आनन्द फेरी कुन देश हो मलाई त्यत्ती थाहा भएन जानु भयो । आनन्द को अनुपस्थितिमा मलाई खल्लो पनि लाग्यो । त्यो समयमा इन्टर्नेटको त्यती प्रभाव थिएन । त्यसैले हामीबिच दुरी बड्यो । लग्भग एक दुई बर्ष नै आनन्द बिदेशमा रहनु भयो । म पनि कहिले दमक, कहिले काठमाडौं गर्ने गर्दथे । एक दिन म दमक घरको आगनमा बसिरहेकी थिए । हुलाकी आएर मलाई मेरा चिट्ठी ल्याएर दिए । त्यो समयमा मलाई मेरा प्रङ्शकहरुले धेरै पत्रहरु पठाउने गर्दथे । मैले ति पत्रहरुको भिंडमा आनन्दले पठएको पत्र पनि पाएँ । पत्र खोलेर हेर्दा मलाई मनमा नमिठो लाग्यो । अहिले म सम्झिन्छु। बिदेशमा छु मलाई सबै कुरा भएर पनि केही नभए जस्तो, केही नपुगे जस्तो भान हुन्छ । शायद त्यस्तै त भएको थियो होला नि । ''दिदी म परिवार सँग भएर पनि एक्लो महसुश गरिरहेको छु । तपाइलाई धेरै मिस गरिरहेको छु भन्ने खालका शब्दहरु थिए। हो, यस्तै त हुदो रहेछ नि परदेशमा जो- जे नै भए पनि आफ्नो भावना मिल्ने कुरा मिल्ने नहुँदा एक्लो महसुश त हुन्छ नै जस्लाई पनि ।
यसरी हाम्रा पत्रचार हुन्थे । मलाई पनि भाईको याद खुबै आउथ्यो । केही समस्या पर्‍यो कि आनन्दको याद आउथ्यो । यसरी म ति दिनहरुलाई सम्झिन्छु । कुनै ईतिहासको कथा झै लाग्छ । मान्छेसंगको संगत सम्बन्ध शायदै सबैको यस्तो होला कि जुन सम्झिदा सकारात्मक मात्र होस्। त र मेरो सम्झना र संस्मरणमा हाम्रो अतित सबै सम्झन योग्य र सकारात्मक् नै छ । जस्लाई मैले अहिले यहाँ पोख्न बस्दा पनि ति दिनहरु मेरा आँखाभरी छाएर म आफ्नै दुनियाँमा हराएर सारा दु:ख कष्ट एक पलको लागि भए पनि बिर्सन पुग्छु । म आशा गर्छु आउने समयमा पनि आनन्द र मेरो भेट यसरी मीठो संस्मरण् लेख्न योग्य होस् । म त्यो दिनको प्रतिक्षामा छु । आजको यो संस्मरण् यसरी म बिट मार्न लागिरहेकी छु । अझै आनन्दसङको मेरो भेट हरुको पानाहरु खोल्न बाँकी नै छ । प्रतिक्षा गर्नु होला । अब आउने संस्मरण् अझ मार्मिक छन । फेरी म पोख्ने नै छु । सबैलाई यो पच्न नै पर्छ भन्ने छैन केवल यो मेरो सम्झनाको ब्यथा पोख्ने चौतारी दौतरी भएकोले यसैको सहारा लिदैछु । यस्लाई सबैले माया गरिदीनु होला । जस्ले मेरा कैद भावनाहरुलाई उड्ने अवसर दियो । म अती नै अनुग्रहित छु । मलाई मात्र हैन सबैलाई दिएको छ
la prabha di
chitai nai raknu hola hami pani atur nai chau padna ko lagi ani betit samayaka afna pani chedharu lai purai yak najar lagauna hajur ko lekh le sahayog garyo dhanya bad hajur lai ....
प्रभा जि ! आफूलाई भाग्यमानी सम्झिनुस् ! मन मिल्ने - मन बिसाउने साथी भाई - दिदी -बहिनी पाउनु पनि अहो भाग्य हो । सबैलाई यस्तो भाग्य प्राप्त हुँदैन प्रभा जि ।